Tora mukana weApple zvinopihwa kuvadzidzi vekoreji | ndinobva ku mac
Jordi Gimenez | 13/01/2022 14:52 | Mac makomputa
Parizvino vazhinji venyu munotoziva kuti Apple ine chikamu chega chezvipo zvevadzidzi veyunivhesiti. Mukati mezvipo izvi tinoona kuti zviripo 10% kuderedzwa pazvizhinji zvezvigadzirwa zvehardware zvekambani uye zvimwe zvideredzwa zvinonakidza.
Nenzira iyi, zvinogoneka kuti vazhinji venyu vakatonzwa nezvazvo Apple inopa kuvadzidzi vekoreji, asi tinofanira kuyeuka kuti izvi zvinobatsirawo kuhama dzevadzidzi, vadzidzisi kana vashandi vanoenderana.
Inowanikwa kuvadzidzi vakanyoresa kana kubvumirwa kuyunivhesiti, vabereki vachitengera vadzidzi veyunivhesiti, uye vadzidzisi kana vamwe vashandi vedzidzo.. Kuti utange, tarisa kana iwe uchizadzisa zvinodiwa. Nezvakakodzera Apple zvigadzirwa, unogona kuita zvese zvaunoisa pfungwa dzako. Uye kuti ikubatsire, Apple inopa mitengo yakakosha yechikamu chedzidzo
1 Kuve neUNiDAYS account chinhu chakakosha
1.1 Active discounts ye10% yekutenga mukati megore
2 Kuderedzwa kwave kushanda kwemakore
3 Masevhisi anosanganisirwawo muzvideredzwa izvi
4 Maitiro eKutenga Mac kana iPad paMudzidzi Discount paWebhu
5 Maitiro eKutenga Mac kana iPad paMudzidzi Discount paWebhu
Kuve neUNiDAYS account chinhu chakakosha
Zviripachena, kuti uwane izvi zvideredzwa, chinhu chakakosha chinodiwa, iva neUNiDAYS account. Kuti uite izvi iwe unongo fanirwa kuwana iyo Apple webhusaiti iyo inotitora isu takananga pakugadzira iyi account, isu tinogovera iyo link yekusaina kune UNiDAYS.
Kana danho iri raitwa, tinofanira kufunga zvimwe zvinhu zvakaita sekuti, nhamba yemidziyo yaunokwanisa kuwana ishomaUye zvakare, iwe unofanirwa kugamuchira iyo yekuvanzika mutemo uye kubvumira chete UNiDAYS, uye kwete Apple, kuchengeta, kutonga uye kugadzirisa iyo data yaunopa. Kana iwe usingade kuti UNiDAYS ive neyako data, shandisa dzimwe nzira dzekuongorora.
Kune rimwe divi, zvakakosha kutaura kuti isu zvakare tine zvidzikiso paApple software uye kunyoreswa. Pakati pavo zviri pachena Apple Music, Apple TV, Apple One uye mamwe masevhisi iyo Apple parizvino inopa.
Active discounts ye10% yekutenga mukati megore
Vazhinji vashandisi vanofunga kuti izvi zvinopihwa zvine zuva rekupera, asi kana iri nyaya yekutenga kuyunivhesiti, ivo havana. Vashandisi vanogona kunakidzwa neizvi 10% discounts pane chimwe nechimwe chezvigadzirwa mukati megore, pasina yakatarwa mazuva. Izvi zvinoita kuti zvinakidze kwazvo kuti vadzidzi vatenge chigadzirwa neimwe yeakaundi aya, sezvo nekungonyoreswa tinogona kunakidzwa nekuderedzwa pachigadzirwa, sevhisi, nezvimwe.
Kutengwa kweMacBook nyowani, iMac nyowani, kana chero iPad kana accessory yekambani yeCupertino inogona kudhura nekuda kwekunyoreswa kweUNIDAYS. Izvi zviri active izvozvi saka enderera mberi nazvo.
Kuderedzwa kwave kushanda kwemakore
Vazhinji venyu veterans vanorangarira pawaiudza mutengesi zvakananga kana pawebhusaiti yeApple wakaratidza kuti waida kuderedzwa kwemudzidzi pasina imwe ado. Izvi zvingadai zvakaitwa makore mashoma apfuura. hapana UNiDAYS account kana chero chinhu chakafanana chaidiwa kuti ubatsirwe kubva ku10% kuderedzwa pamutengo weApple zvigadzirwa.
Zvine musoro, vashandisi vazhinji vaiziva nezve kuderedzwa uku kwevadzidzi vakatora mukana nazvo. Pasina kuva vadzidzi, vakakumbira kuderedzwa uye mukupedzisira Apple yakamira "kuvimba zvakanyanya" uye yakasarudza kushandisa iyi ratidziro kuburikidza neUNiDAYS kuti chaizvo chinhu chazvinoita kutarisa kana isu tine account yemudzidzi kuyunivhesiti kana chikoro.
Masevhisi anosanganisirwawo muzvideredzwa izvi
Kune vese avo vanoda kunakidzwa nekuderedzwa pakunyoreswa kweApple Music, Apple TV +, Apple Fitness +, Apple One uye mamwe ese masevhisi anopihwa neApple pamwe chete kana zvakasiyana, vanogona kubatsirwa kubva mukuderedzwa kwemudzidzi uku.
Semuenzaniso, kuti tiwane kuderedzwa pakunyorera kweApple Music, isu tinofanirwa kutevedzera aya matanho:
Vhura iyo Mimhanzi kana iTunes app uye tinya Teerera kana Kwako
Tinya kana kudzvanya muyedzo unopihwa (mumwe pamunhu kana mhuri)
Sarudza Mudzidzi, wobva wadzvanya kana kudzvanya "Tarisa Zvinodiwa"
Iwe unozotungamirwa kune iyo UNiDAYS webhusaiti, kwauchazoda kutevedzera iyo-pa-skrini mirairo kuti uone kunyoreswa kwako. Kana UNiDAYS yaona kuti uri mudzidzi, unozoendeswa kuMumhanzi app kana iTunes
Saina neApple ID uye password yaunoshandisa kutenga. Kana iwe usina Apple ID, sarudza Gadzira New Apple ID uye tevera matanho. Kana usina chokwadi chekuti une Apple ID, tinogona kukubatsira kuziva.
Simbisa ruzivo rwako rwekubhadhara uye wedzera nzira yekubhadhara inoshanda
Tinya kana kudzvanya Join
Izvi ndizvo zvinoitwa zvakananga kune ese Apple masevhisi uye kutenga chigadzirwa kwakafanana. Maitiro acho ari nyore uye anonzwisisika, hauzove nematambudziko nazvo, zvese zvaunofanirwa kuita kuenda zvakananga kune chaiyo chikamu chevadzidzi kuti vatenge.
Svika UNiDAYS uye unakirwe nemitengo iyi pane zvigadzirwa zveApple.
Maitiro eKutenga Mac kana iPad paMudzidzi Discount paWebhu
Izvo zvidzikiso zvinosiyana zvichienderana nechigadzirwa, asi paMacs iwo ari gumi muzana pamutengo wavo. MuIpad vanobva pa6 kusvika ku8% zvichienderana nemhando yakasarudzwa uye mune zvishongedzo zvinoitika zvakanyanya kana zvishoma zvakafanana. Mutengo weiyo yakachipa MacBook muchitoro chevadzidzi i1016 euros. Iyo yekupinda-level kit inowedzera Apple's M1 chip, 8 CPU cores, uye 7 GPU cores. Panyaya yemhando yepamusoro (iyo inokurudzirwa) mutengo unoramba uri pa1.260,15 euros, uye iyi yatova iyo inowedzera 8-core GPU uye 8-core CPU zvakare.
Kutenga uchishandisa UNiDAYS, tevera matanho aya.
Pinda zvakananga mu apple education webhusaiti uye tinya pane Tarisa neUNiDAYS sarudzo
Gadzira account yedu nyowani kana isu tisati tatova nayo uchishandisa email kero uye password
Kana account yako yangogadzirwa, unofanirwa kuona kuti uri mudzidzi nekutevera matanho
Chidzitiro chinoonekwa paunogona kutsvaga zvakananga yunivhesiti yako kana koreji yauri kunyoresa nayo
Kana wangoiwana, unogona kunyoresa uye kupinda zvakare muApple Store yedzidzo nekuwana iyo yakaderera
Kune vese avo vane Apple chitoro padhuze nemba yavo kana vanogona kuenda kune imwe, zvakare zvinogoneka kushandisa iyo UNiDAYS mutero wakananga mavari. Izvi zvideredzwa hazvichinje zvachose kana iwe ukatenga pawebhu kana muchitoro chenyama.
Kana wangosvika kuchitoro unofanira kuratidza chero gwaro rinoratidza zvakananga kuti uri mudzidzi, mudzidzisi kana mudonzvo wenzvimbo yedzidzo. Muchitoro ivo vanozosimbisa iyo data uye zvidzoreso zvakafanana zvatinowana muchikamu che Online Store chedzidzo zvichapihwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Tora mukana weApple inopa kune vadzidzi vekoreji
Iwe unogona ikozvino kudhawunirodha Dropbox beta inoenderana neApple's M1